PPSSPP: Emulator casri ah oo awood badan | Laga soo bilaabo Linux
PPSSPP: Waa emulator casri ah oo awood badan
Luigys toro | | Aplicaciones, GNU / Linux, Ciyaaraha
2016 wuxuu ahaa sanad ay cayaaraha fiidiyowga ay keli kaliyeeyeen wararka oo dhan, warshadani awooda badan ayaa iska leh oo xitaa balaarisay helitaanka ciyaaro loogu talagalay Linux. Si kastaba ha noqotee, kuwa jecel fasallada waxay sii wadaan inay ku raaxaystaan ​​annaga PSP o NintendoHadda, kuwa aan haysan konsole sida PSP waa inaysan walwalin, waxaan soo bandhigeynaa a emulator PSP awood badan loo yaqaan PPSSPP (Xikmad badan ayaa ku jirta magaca, maya?).
1 Waa maxay PPSSPP?
2 Tilmaamaha PPSSPP
3 Sida loo rakibo PPSSPP Linux
3.1 Ku rakib PPSSPP ka soo dejintooda
3.1.1 Ku rakib SDL2 adoo isticmaalaya maareeyaha xirmadaada 'distro'
3.2 Ku rakib PPSSPP ubuntu iyo noocyada
3.3 Ku rakib PPSSPP archlinux iyo wax soo saarka
4 Gabagabo ku saabsan PPSSPP
Waa maxay PPSSPP?
PPSSPP waa mashruuc ka mid ah il furan, ruqsad ka haysta GPL 2.0 oo ku qoran C ++ by Henrik Rydgård. Kuu ogolaanayaa inaad ku ciyaaro kulan PSP on Computers, on moobiillada Shiinaha ugu fiican iyo kiniiniyada, waa qaab-dhismeed isku mid ah (Linux, Windows, Android, MacOSX ...), oo la jaanqaadaya xallinta aaladdayada iyo ku ciyaarista ciyaar tayo leh.
Sidaa si la mid ah, qalabkani wuxuu siinayaa suurtagalnimada in lagu daro waxyaabaha udubdhexaadka u ah cayaaraha, habeynta kontaroolada, sameynta nuqulada cayaarahayaga, iyo waxyaabo kale oo badan oo ka dhigaya emulator weyn.
Kuu ogolaanayaa inaad ku ciyaarto go'aano badan (oo ay ku jiraan qeexitaan sare).
U-jaanqaadka loogu ciyaaro Tablet-ka iyo taleefannada gacanta.
Kartida aad u habeyn karto kantaroolka shaashadda taabashada ama isticmaal kontaroole bannaanka ama kumbuyuutarka.
Kaydi oo soo celi gobolka ciyaarta meel kasta, wakhti kasta-
Ku darista qaababka ciyaarta.
Waxaa loo isticmaali karaa kudhowaad processor kasta, GPU waa inuu xalliyo OpenGL 2.0.
Isukeenis tiro badan oo ciyaaro ah.
Sida loo rakibo PPSSPP Linux
Waxaan ku rakibi karnaa PPSSPP mid ka mid ah siyaabahan soo socda:
Ku rakib PPSSPP ka soo dejintooda
Tani waa inaan raacno talaabooyinka soo socda
Ku rakib SDL2 adoo isticmaalaya maareeyaha xirmadaada 'distro'
Wixii Debian / Ubuntu iyo Derivatives: Ku rakib xirmada "libsdl2-dev".
Wixii Fedora / RHELy Derivatives: Ku rakib xirmada "SDL2-devel".
Wixii ku saleysan BSD: Ku rakib xirmada "sdl2".
Soo dejiso PPSSPP oo u dhiganta dhismahaaga PPSSPP (zip, amd64) o PPSSPP (zip, i386).
Ku rakib PPSSPP ubuntu iyo noocyada
Fur konsol oo socod amarada soo socda
sudo add-apt-repository ppa: ppsspp / xasilloon sudo apt-hel cusboonaysiinta sudo apt-hel rakib ppsspp
Ku rakib PPSSPP archlinux iyo wax soo saarka
Kaliya fur konsole oo socodsi amarka soo socda
Gabagabo ku saabsan PPSSPP
Emulator-kan caanka ah ee PSP ayaa wax badan iga caawiyay, maadaama uusan cunin qadar badan oo ilo, laakiin taasi micnaheedu maahan inuusan laheyn waxqabad sare markii uu la ciyaarayo, waqti hore waxaan qaatay saacado badan iyaga oo adeegsanayay iyo noocyadii ugu dambeeyay. wax badan ayey hagaajiyeen.
Way ku habboon tahay in lala isticmaalo kantaroolayaasha (waxaa jira dhowr la jaan qaadi kara Linux), helitaanka ciyaaro iyo rakibisteeda waa sahlan tahay, laakiin had iyo jeer isku day inaad isticmaasho nuqullo "sharci ah". Waxaan rajeynayaa in emulator-ka uu kuu ogolaanayo inaad ku raaxeysato ciyaarta aad jeceshahay, shaqsiyan waan kula talinayaa Gooryaanka Dagaal Furan
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » PPSSPP: Waa emulator casri ah oo awood badan
Wax ku darsasho weyn, mahadsanid!
Ku jawaab Iván Sainz
Qalabaynta suuqgeynta: waa maxay sidee se kuu caawin kartaa?
U beddel xirmo Debian .deb xirmo Arch Linux ah